KAOMININA SOAHAZO, DISTRIKAN’I TOLIARA II : Mpamboly hasy roa maty voatifitra, nodoran’ny dahalo ny tranony – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:40
Accueil/Fanadihadiana Manokana/KAOMININA SOAHAZO, DISTRIKAN’I TOLIARA II : Mpamboly hasy roa maty voatifitra, nodoran’ny dahalo ny tranony
Nitrangana fanafihan-dahalo mahery vaika tao amin’ny fokontany Ankililaly, Kaominina Soahazo, anatin’ny distrikan’i Toliara II, ny 4 septambra lasa teo. Olona roa no indray maty notifirin’ny dahalo, raha naratra voafiran’ny famaky kosa, ny iray. Voarohirohy tamin’izao zava-niseho izao ny sefom-pokontany sy ny zanany iray. Niakatra fampanoavana izy ireo, saingy votsotra ilay sefom-pokontany, taorian’ny fidirany am-ponja vonjimaika. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 26 septembre 2020
Ilay rangahy eo ankavanana, isan’ireo mpamboly hasy namoy ny ainy.
Nisehoana fanafihana mahery vaika tao amin’ny fokontany Ankililaly, Kaominina Soahazo anatin’ny distrikan’i Toliara II, ny harivan’ny 4 septambra lasa teo, tokony ho tamin’ny 6 ora sy fahefany. Raha ny angom-baovao, andian-dahalo nitondra basy sy nirongo antsy sy famaky ireo nanafika, tamina mpamboly hasy any an-toerana. Taorian’ny fanafihana nataon’ireo dahalo, dia tsy nisy ny zavatra lasa, saingy namoizana aina izany. Mpamboly hasy iray, maty teo no ho eo, raha nodimandry teny an-dalana kosa, ny mpamboly hasy iray, izay raim-pianakaviana, rehefa nandeha hitondra azy tany amin’ny Hopitaly. Ilay olona iray fanintelony kosa, dia voavotra ny ainy, na izany aza, dia voafira famaky ny hatony. Nahitana faharatrana koa ny tanany, izay nanohana tamin’ny famaky. Vokatr’izany, nitondra takaitra mihitsy ilay lehilahy fahatelo, na tsy namoy ny ainy aza. Ny tena nampalahelo nataon’ireo olon-dratsy ireo tamin’ireo olona lasibatry ny fanafihana tao amin’ny Kaominina Soahazo, distrikan’i Toliara II ity, ny fandorana ny tranon’izy ireo. Vantany vao nahare ity fanafihan-dahalo ity, ny avy amin’ny Zandarimariam-pirenena dia tonga tany an-toerana nanao ny asany sy nikaroka ireo nahavanon-doza. Isan’ny tonga teny an-toerana ny Kaomandin’ny kaompanian’i Toliara I nizaha ifotony ny fanafihan-dahalo ity.
Voarohirohy ny sefom-pokontany ao an-toerana
Nandritra ny naha am-bohitra ny razana, dia ny zandary avy ao amin’ny Kaomandin’ny borigady Betioky Somotra no nanao ny fiambenana sy ny fandaminana ny tao an-tanàna, mandra-pahatonga ny fandevenana ny maty, tamin’io fotoana io. Ny olona fantatra fa nanafika an’ireo mpamboly hasy ireto, ny zanaky ny sefom-pokontany Ankililaly sy ny sefom-pokontany no voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ity fanafihan-dahalo mahery vaika niseho tamin’ireo mpamboly hasy tao an-toerana. Izy ireo no anisan’ny naniraka sy tompon’antoka tamin’ity fanafihana nahafatesana olona roa sy naharatrana olona iray, voafira famaky. Na efa fantatra aza, ireo olona namono sy tompon’antoka tamin’ity fanafihan-dahalo mahery vaika ity, dia tsy sahy nandray andraikitra ny Dinabe teo anivon’ny fokontany sy ny kaominina tao an-toerana, noho ny karazana kolikoly nataon’ilay sefom-pokontany ao an-toerana. Ity sefom-pokontany ity rahateo dia natahoran’ireo Dinabe any an-toerana, noho ny fananany omby marobe sy ny fahafahany mampiasa vola, amin’ny tsy hisehoan’ny fahamarinana, momba izao vono olona niseholany, tamin’ny alalan’ny fanafihan-dahalo.
Hiditra an-tsehatra ny dinaben’i Distrika
Mitana andraikitra goavana ho an’ny fiarahamonina eny ifotony, ny fandraisana andraikitra tontosain’iny Dinabe, ho fametrahana ny fandriampahalemana maharitra any amin’ny faritanin’i Toliara iny. Mitsinjara ho efatra ny Dinabe any amin’iny Faritra iny. Rehefa tsy mandray andraikitra, ohatra, ny dinabe eo anivon’ny fokontany, miakatra an-tsehatra ny dinabe eo anivon’ny Kaominina. Raha mbola tsy mahatapa-kevitra indray ireo, mirotsaka mandray an-draikitra ny dinaben’ny distrika. Raha mbola angady tsy mahatapak’ahitra indray ireo, dia miditra an-tsehatra ny dinaben’ny Faritra. Noho ny fampiasana karazana kolikoly tanterahin’ny sefom-pokontany, izay voarohirohy momba ny fanafihan-dahalo any an-toerana io, dia lasa nilangalana tsy mety mandray andraikitra ny Dinabe teo anivon’ny fokontany sy ny Kaominaly. Vokatr’izay, fantatra fa amin’ity anio, 26 septambra ity, no hirotsaka an-tsehatra hanapa-kevitra momba ity fanafihan-dahalo namoizana ain’olona roa sy nandorana tranon’ilay lasibatra ny Dinaben’ny Distrika, izay atao ao Ankililaoka.
Votsotra ilay sefom-pokontany voarohirohy tamin’ny fanafihana
Manaitra ny sain’ny tomponandraikitra, araka izany, ny fianakavian’ny maty vokatr’ity fanafihan-dahalo niseho tany amin’ny Kaominina Soahazo, distrikan’i Toliara II, ny 4 septambra lasa teo. Satria ny eo anivon’ny Dinabe, dia tsy misy afa-kanery azy ireo amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra, saingy nisy ny karazana kolikoly nataon’ilay sefom-pokontany tamin’ireo mpitarika ny Dinabe teo anivon’ny Fokontany sy ny kaominina. Miahiahy, araka izany, ny fianakavian’ny maty fa misy trangana kolikoly niseho teo anivon’ny Dinabe tany an-toerana. Ny manaitra amin’ity raharaha ity koa, dia tonga hatramin’ny tsy fanomezana « certificat médical », ny olona maratra voafira famaky, tamin’ilay fanafihana nataon’ireo dahalo tany an-toerana. Hatramin’ny dokotera any an-toerana ao Soahazo avy no iharan’ny karazana Ramatahora sa voadim-bolan’ilay sefom-pokontany voarohirohy tamin’ny fanafihan-dahalo ? Taorian’ny fitoriana nataon’ny fianakaviana, fantatra fa isan’ny voarohirohy tamin’ity raharaha ity, ny sefom-pokontany ao Ankililaly sy ny zanany lahy, izay nandray anjara sy nampaniraka, tamin’ny fanafihan-dahalo mahery vaika io. Taorian’ny fandraisan’ny Zandary ny raharaha momba ny fanafihan-dahalo ity, dia notazonina avy hatrany ny sefom-pokontany sy ny zanany lahy, isan’ny voarohirohy tamin’ity fanafihan-dahalo ity. Ny alatsinainy 7 mey, taorian’ny fanafihan-dahalo io no niakatra fampanoavana ireo olona voarohirohy, ka niditra am-ponja vonjimaika ny sefom-pokontany sy ny zanany lahy.
Mampiteny ny volany ?
Ny zoma faha-11 volana septambra lasa teo anefa, akory ny hatairan’ireo fianakavianan’ireo niharam-boina fa tafavoaka ny fonja tany an-toerana ny sefom-pokontanin’Ankililaly, ny alina tokony ho tamin’ny 8 ora. Ny sefo fokontany ihany no voalaza fa nahazo fahafahana vonjimaika, raha mbola voatazona kosa, ny zanany lahy, momba ity resaka fanafihan-dahalo mahery vaika niseho ny 4 septambra lasa teo, tany amin’ny Kaominina Soahazo, anatin’ny distrikan’i Toliara II. Raha ny fanadihadiana, dia voalaza fa tsy misy porofo mazava nitazomana azy, ka izay no antony nahazoany fahafahana vonjimaika. Ny fanadihadiana lalina momba ity raharaha ity anefa, raha ny angom-baovao hatrany dia mbola tsy vita, kanefa dia izao nahazo fahafahana vonjimaika izao ny voampanga. Mangataka fanazavana momba ity raharaha ity amin’ny Fitondrana mahefa, araka izany, ny fianakavian’ny maty mahakasika izao famoahana ny olona voampanga izao.
Ny tsikaritry ny fianakavian’ny maty tamin’izao raharaha izao, vantany vao nitranga io vono olona mahatsiravina, niampy doro trano io, dia efa tsy nitsahatra nivarotra omby io sefom-pokontany io, nanomboka ny 5 septambra ka taorian’ny nivoahany ny fonja, tsy latsaky ny omby 40 no novarotan’ity sefo fokontany ity, mba hampiasainy hanaovana ny karazana kolikoly. Ny mampalahelo tamin’izao raharaha izao, taorian’ny nivoahan’ny fonja, dia nampaniraka olona indray izy, mba hamotika ny voly hasy tao an-toerana. Raha ny lalàna mifehy ny dina anefa, dia tsy azon’ny olona voampanga ny mivarotra omby na fananana, saingy voahitsakitsaka izany, tamin’ny fihetsika nataon’ity sefom-pokontany ity. Tsy vitan’ny manampatra fahefana izy, fa mbola manao fafikatrana ny vola, mba tsy hisehoan’ny marina. Andrasana, araka izany, ny fivoaran’ny raharaha.